Wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo sameeyay naf-hurnimo ku aaddan fatahaadda Beledwayn (Muxuu sameeyay?!) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo sameeyay naf-hurnimo ku aaddan fatahaadda...
Wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo sameeyay naf-hurnimo ku aaddan fatahaadda Beledwayn (Muxuu sameeyay?!)
(Virginia) 03 Nof 2019 – 𝗔𝗯𝘀𝗵𝗶𝗿 𝗖𝗶𝗹𝗺𝗶, waa wiil dhallinyaro ah waxa uu ku nool yahay gobolka 𝗩𝗶𝗿𝗴𝗶𝗻𝗶𝗮 ee duleedka 𝗪𝗮𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝗻.
Aniga iyo asxaab aan 𝐕𝐎𝐀 ka wada shaqeyno ayaa galnay dukaan aan xaafaddeenna ka fogeyn, waxaan ku aragnay ninkan oo sita sanduuq uu ku dhajiyay sawirrada 𝗙𝗮𝘁𝗮𝗵𝗮𝗮𝗱𝗱𝗮 𝗕/𝘄𝗲𝘆𝗻𝗲. Shaqaalaha dukaanka iyo dadkii ka adeegnayay ayuu u sharraxayay baaxadda dhibaatada, waxaanu ku qancinayay in ay tabarrucaadda intii ay awoodaan kaga qeyb-qaataan.
Waxa uu ii sheegay in yoolkiisu uu yahay 𝗸𝘂𝗻 Doo𝗹𝗹𝗮𝗿, oo uu xusay in ay ugu yaraan 𝟮𝟬 𝗾𝗼𝘆𝘀 ku filan tahay. Markaa waxaa ka dhinnaa qiyaastii saddex boqol, wuxuu rajo ka qabay in uu dhameystiro inta aan la kala seexan, haddii ay u suurto-geli weysana wuxuu yiri “𝗮𝗻𝗶𝗴𝗮 𝗮𝘆𝗮𝗮 𝗱𝗵𝗮𝗺𝗲𝘆𝘀𝘁𝗶𝗿𝗮𝘆𝗮”
Arrinta la yaabka igu noqotay ayaa ah, in ninkani aanu B/weyne waligii arag, qofna aanu ka aqoon, beeshiisuna aanay degin, walibana aanu garaneynin cid uu lacagtan ku hagaajiyo. Wuxuu igu yiri “𝗺𝗮𝗮𝗱𝗮𝗮𝗺𝗮 𝗮𝗮𝗱 𝘄𝗲𝗿𝗶𝘆𝗲 𝘁𝗮𝗵𝗮𝘆 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗮 𝗮𝗮𝗻 𝘀𝗼𝗼 𝗱𝗵𝗮𝗺𝗲𝘆𝘀𝘁𝗶𝗿𝗼 𝗮𝗮𝗻 𝗸𝘂𝘂 𝗱𝗵𝗶𝗶𝗯𝗼 𝗲𝗲 𝗮𝗱𝗶𝗴𝗮 𝗱𝗶𝗿” laakiin kama aanan oggolaan, waxaanan u sheegay in kulan lacag loogu uruurinayo dhibbaneyaasha fatahaadda uu habeen kadib isla magaaladan aan joogno ka jiro, waxaanan kula taliyay in uu halkaa isagu tago geeyana wixii uu soo uruuriyay.
Waxaan aad usii fajacay markii uu i tusay 𝗯𝗮𝗮𝗯𝘂𝘂𝗿 yar oo uu isagu leeyahay oo uu 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲-𝗸𝗮 ku iibinayo. Lacagta uu ku doonayo afar jeer ayey ka yar tahay inta uu gaarigaasi suuqa ka joogo. Wuxuu ii sheegay in sababta uu qiimaha u dhimay ay tahay, si uu beec dag dag ugu helo, isaga oo lacagta uu ku iibiyana u qorsheeyay in uu ku daro tabarrucaadda uu uruurinayo.
Soomaalidu dad wanaagsan oo niyad san ayay u badan tahay, dhaqan ayeyna u leedahay isku-gurmadka iyo is-gargaarka.
𝗙𝗮𝗱𝗹𝗮𝗻 𝗻𝗶𝗻𝗸𝗮𝗮𝘀 𝗵𝗮 𝗹𝗼𝗼 𝗱𝘂𝗰𝗲𝗲𝘆𝗼.
Previous articleDAAWO: Baarlamanka Puntland oo aqlabiyad ku diidey dalab ka yimid Xeer-ilaalinta oo xasaanadda looga qaadi lahaa Xil. Cawil (Arag dalabka)
Next articleWasiirka Warfaafinta oo UL kala dhex kacay Warbaahinta DF (Rag xilalkii laga qaaday & kuwo la magacaabay)